Mystery – Family Of Films
Dead Body (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Dead Body (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး ကြောက်တတ်ရင် လုံးဝ မကြည့်နဲ့နော်.... Dead Body (2017) သည် IMDb 4.9/10 Rotten Tomatoes 79% Horror Freak News 4/5 ရထားသော ဒါရိုက်တာ Bobbin Ramsey က ရိုက်ကူးထား၍ Ian Bell, Ramon Isao တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Spencer Hamp, Cooper Hopkins, Rachel Brun တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Horror, Mystery, Thriller ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကျောင်းသားကိုးယောက်ဟာ တောထဲက တိတ်ဆိတ်တဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးမှာ Dead Body ဆိုတဲ့ ဂိမ်းကစားရင်း တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် အသတ်ခံရပုံ ဘယ်သူက သတ်တာလဲ ဘယ်သူတွေ သေမလဲ ...
The Outsider (2018) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Outsider (2018) မြန်မာစာတန်းထိုး ဂျပန်ထောင်ထဲ ရောက်နေတဲ့ အမေရိကန်သား တစ်ယောက်က ယာကူဇာထဲကို ရောက်သွားပြီး ဘယ်လို ရုန်းကန်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို၊ ဂျပန်ပြည် အိုဆာကာမြို့လေးကို အခြေတည်ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ယာကူဇာတွေရဲ့ အကြောင်းကို အသားပေးပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။ ယာကူဇာဆိုရင် ဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်း ပဲလို့ အများစု သိကြပါတယ်။ ဂိုဏ်းတစ်ခုထဲမှာ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ ထပ်ခွဲပြီး ရှိပါသေးတယ်။ ဒီ ဇာတ်ကားက အဲဒီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာ ရှိခဲ့တဲ့ မကြေလည်မှုတွေ၊ သစ္စာဖောက်မှုတွေ၊ စီးပွားရေးတွေ၊ နယ်မြေ ကိစ္စတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ယာကူဇာဆိုရင် ဆေးမှင်နဲ့ ကင်းလို့ မရပါဘူး။ ဆေးမှင် တစ်ခုစီတိုင်းက အဓိပ္ပာယ် တစ်ခုဆီ ရှိကြတာ၊ အဖွဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့ ခေါင်းဆောင်ကို အဖေတစ်ယောက်လို သဘောထားတာ၊ အဖွဲ့ဝင်တွေက ညီအစ်ကိုလို သဘောထားကြတာ၊ ခေါင်းဆောင်ကို သိက္ခာကျစေရင် နောင်တရကြောင်း ပြတဲ့အနေနဲ့ အိုတိုရှိမဲ လုပ်ကြတာ ...
Rahasya (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Rahasya (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး စုံထောက်ကားတွေထဲမှာတော့ ဒီကားကို ကျွန်တော် တော်တော်သဘောကျမိပါတယ် အားလုံးလည်းကြိုက်ကြမယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်… Rahasya (2015) သည် IMDb 7.7/10 Google users 89% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Manish Gupta ကိုယ်တိုင်ရေးသားရိုက်ကူးထား၍ သရုပ်ဆောင် Kay Kay Menon, Ashish Vidyarthi, Tisca Chopra တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Mystery, Thriller ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ဆရာဝန် လင်မယားတို့၏ သမီးလေးဟာ သူအိပ်ပျော်နေစဉ်အတွင်း အသတ်ခံပါတယ် အဲ့ဒီ အသတ်ခံရမှုအတွက် ရဲက အမှုကို အလျင်စလိုလုပ်လိုက်ရမှာ သတ်တဲ့ တရားခံက အဖေဆိုပြီး ဖမ်းချုပ်ခံရတဲ့အခါ အမေဖြစ်သူက အသနားခံစာတင် ပြန်လည်စုံစမ်းတဲ့အခါ တကယ်သတ်သူသည် ဘယ်သူဖြစ်မလဲ တကယ်သတ်သူကို စုံစမ်းလို့ကော ရပါ့မလားဆိုတာသိချင်ရင် ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှုကြည့်ကြပါခင်ဗျာ… Reviewed by Win ...
Game of Death II (1981) မြန်မာစာတန်းထိုး
Game of Death II (1981) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 5.2/10 Google User 86 % Genre: Action, Mystery Run Time: 1h 26min ဘရုစ်လီ မသေဆုံးခင်လေးရိုက်ထားတဲ့ နောက်တစ်ကားပါ…. Game of Death II (1981) သည် IMDb 5.2/10 Google users 86% ရထားသော ဒါရိုက်တာ See-Yuen Ng, Sammo Kam-Bo Hung က ရိုက်ကူးထား၍ Tin Shing Hoh, Chuo-Lun Ting တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Bruce Lee, Tae-jeong Kim, Jang Lee Hwang တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Mystery ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ဘီလီလိုသည် သူရဲ့ ...
I Remember You (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
I Remember You (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး I Remember You (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး ***************************************** Ég man þig (original title) FoF ပရိသတ်ကြီးအနေနဲီ့သြကာသလောကကြီးကို အတ္တတွေနဲ့ကျော်လွှားနေတဲ့အချိန်မှာ သတိရစရာလူတွေ မုန်းမေ့စရာလူတွေ ရှိခဲ့မှာပေါ့။ ပရိသတ်ကြီးရဲ့ မုန်းမေ့မှုကို ခံစားရတဲ့သူတွေက အထုးသဖြင့် ကွယ်လွန်သူတွေပဲ ဖြစ်ဖို့များပါလိမ့်မယ်။ ကွယ်လွန်သူတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမုန်းတရားကင်ပေတိုင်ထက်မှာ သက်ငြှာမှုကင်းမဲ့စွာ အဆုံးစီရင်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်သွားနိုင်မလဲ... လူတွေသေဆုံးခဲ့ရင် တမလွန်ကမ္ဘာနဲ့ လက်ရှိကမ္ဘာအကြားမှာ ပိတ်မိတတ်ကြတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးက သူတို့အလောင်းကို ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေ မတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာပေါ့။ ဒီလိုကမ္ဘာနှစ်ခုကြား ပိတ်မိသွားခဲ့ရင် ဝိညာဉ်တွေက စွမ်းအားကြီးမားလာပြီး ကျန်ရစ်သူမိသားစုကို ကိုယ်ထင်ပြပြီး သူတို့အလောင်းကိုရှာဖို့ သတိပေးတတ်ကြတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ အသက်အန္တရာယ်ပါ ခြိမ်းခြောက်တတ်ကြတယ်။ ဒီကားထဲက ရှစ်နှစ်သားအရွယ် ဘင်နီကလည်း သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ တူတူပုန်းတမ်းကစားနေပြီး ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးပြီး သေဆုံးသွားပါတယ်။ သူသေဆုံးတဲ့အခါ သူ့အလောင်းကို ဘယ်သူမှ မတွေ့ကြတော့တဲ့အခါ ဘင်နီကလည်း ကမ္ဘာနှစ်ခုကြား ...
7 Khoon Maaf (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
7 Khoon Maaf (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.2/10 Google Users 79% Genre: Drama, Mystery, Thriller Run Time:2hours 17 mins မိန်းမတိုင်းဟာ တစ်သက်မှာ တစ်ခါတော့ သူတို့ ယောက်ျားတွေကို သတ်ပစ်ဖို့ စဉ်းစားဖူးတယ် တဲ့ ..... ခင်ဗျားဟာ အိမ်ထောင်သည်ဆိုရင် ခင်ဗျားရဲ့မိန်းမကို မေးကြည့်ပါ ။ အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်တော့ ခင်ဗျားကို သတ်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုတော့ သူစဉ်းစားဖူးလိမ့်မယ်တဲ့ ..... ကဲ .. ဒါဆို ဘာလို့ ခင်ဗျား အခုထိ အသက်ရှင်နေလဲ သိလား? "ကလေး" ကလေးတစ်ယောက်လောက် ရလိုက်ရင် မိန်းမတွေဟာ ယောက်ျားကို ပိုပြီး သည်းခံလာနိုင်လာတယ်တဲ့ ... ဒါကြောင့် ခင်ဗျား အခုချိန်အထိ အသက်ရှင်နေတာပေါ့ ..... ဆူဆန်နာ အန်နာမရင်း ဂျိုဟန်နာ ...
School 2013 Korea TV Series (1999-2013 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
School 2013 Korea TV Series (1999–2013 ) မြန်မာစာတန်းထိုး Asian Wiki 92% IMDb 8.1/10 Google User 95% Drama, Mystery School 2013 KBS ရုပ်​သံလိုင်းရဲ့ school series စီးရီး​တွေရဲ့ ငါးခု​မြောက်​ဖြစ်​ပြီး နာမည်​ကြီးဇာတ်လမ်းတွဲတစ်​ခုပါ ဒီဇာတ်​လမ်းတွဲက​နေ နာမည်​ကြီးသရုပ်​​ဆောင်​များစွာကို ​​မွေးထုတ်​​ပေးခဲ့ပါတယ်​ ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်းက​တော့ ဂျန်​အင်​​ဂျေး(Jang Nara)နဲ့ ဂန်​ဆယ်​ချန်း(Choi Daniel) ဟာ ​ကျောင်းသား​တွေ သင်​ကြားမှု​တွေနဲ့ ပတ်​သက်​လို့ အမြင်​မတူကြတဲ့ ဆရာနှစ်​ဦးပါ သူတို့ဟာ အထက်​တန်းဒုတိယတန်းကို တူတူသင်​ကြားရရင်း ​ကျောင်းသား​တွေရဲ့ ပဋိပက္ခ အနိုင်​ကျင့်​မှု​တွေ ပြိုင်​ဆိုင်​မှု​တွေ မိဘ​တွေရဲ့ များပြားလှတဲ့​တောင်းဆိုမှု​တွေပါ ​ဖြေရှင်း​ပေးရပါတယ် ဂိုနမ်​ဆွန်း(Lee Jong Suk)နဲ့ ပတ်​ဟုံဆိုး (Kim Woo Bin ) ​ကျောင်းသားနှစ်​​ယောက်​ရဲ့သူငယ်​ချင်း​အချစ်​ အနစ်​နာခံမှု​တွေပါ ရှုစားရမှာဖြစ်​ပါတယ်​< ဆရာနဲ့ ​ကျောင်းသားအကြားဖြစ်​တတ်​တဲ့ ပြသနာ​တွေ ...
Verónica (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Verónica (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.5/10 Rotten Tomatoes 100% Google User 86 % Genre: Drama, Mystery, Thriller Run Time: 1 hour 21 mins Verónica (2017) သည် IMDb 6.5 Rotten Tomatoes 100% Google Users 86% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Carlos Algara, Alejandro Martinez-Beltran တို့ ရိုက်ကူးထား၍ Carlos Algara, Tomas Nepomuceno တို့က ဇာတ်လမ်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Olga Segura, Sofía Garza, Arcelia Ramírez တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Drama, Mystery, Thriller (Mexico) ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. အမျိုးသမီးစိတ်ပညာရှင် တစ်ဦးဟာ ဆေးကုနေရာက ရပ်တန့်ပြီး ...
Wonderstruck (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Wonderstruck (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး Genre - Drama / Mystery IMDb - 6.6 , RT - 66% အမေရိကန်စာရေးဆရာ Brian Selznick ရဲ့ The New York Times Best Seller စာအုပ်ကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းထားတာပါ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒီကားကိုမကြည့်ကြဖို့ပြောရမှာပါပဲ..ဘာလို့ဆို ဒီကားက ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အကြိုက် မဟုတ်ဘူး...ကျုပ်တို့အကြိုက်က စွန့်စားခန်းတွေ အက်ရှင်တွေပြည့်နေတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေ..ဒီကားက ဘာအက်ရှင်မှလည်း မပါဘူး...ခင်ဗျားတို့ ကြားဖူးကြမှာပေါ့ Hellen Keller အကြောင်း..အလကား မျက်မမြင် နားမကြား ဒုက္ခိတမလေးလေ...အခု ဒီကားလည်း ဘာထူးလဲ... နားမကြားတဲ့သူနှစ်ယောက်အကြောင်း ရိုက်ထားတာ.. ဘန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးက အရင်က လူကောင်း တနေ့ကျ မိုးကြိုးထိမှန်ပြီး နားမကြား ဖြစ်သွားရော..သူက သူ့အဖေအကြောင်း သူ့အမေကို အမြဲမေးတယ်..သူ့အမေကဖြေဖို့အမြဲ ငြင်းတယ်...ဒါနဲ့သူနားမကြားဖြစ်သွားပြီး တနေ့မှာ သူ့အဖေက New York ...
Pandorum (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
Pandorum (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး Pandorum (2009) သည် IMDb 6.8 Google User 85% ဒါရိုက်တာ Christian Alvart ရိုက်ကူးထား၍ Travis Milloy, Travis Milloy တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Dennis Quaid, Ben Foster, Cam Gigandet တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Horror, Mystery ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. အာကာသယာဉ်တစ်စင်းပေါ်မှာ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး သူတို့ရဲ့ စစ်ဆင်ရေး နဲ့ သူတို့ ဘာဆိုတာကိုဘာ မသိဘဲ နိုးထလာသောခါ ဘယ်လို အက်ရှင် ကြောက်စရာတွေ ဆက်တွေ့ရမလဲ ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြည့်ကြပါခင်ဗျာ….. Review By Win Kyaw Thu Translated By Lotus Black Encoded By ...
Buried (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
Buried (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 7.0/10 Rotten Tomatoes 86% Google User 73 % Genre: Drama, Mystery, Thriller Run Time: 1 hour 35 mins ဒီဇာတ်ကားကို အရမ်းသဘောကျလို့ ပြန်ထားတာ ကြာပါပြီ ဘာသာပြန်စမ်းသပ်ခါစ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ် ပြန်ချင်လို့ပြန်ထားတာပါ အရမ်းလည်း သဘောကျပါတယ် လူတစ်ယောက် အခေါင်းတစ်လုံး မီးခြစ်တစ်လုံး ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ အသက်ရှင်ဖို့ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ရုန်းကန်သွားတာကို တစ်ကားလုံး မပျင်းရိအောင်ရိုက်ပြ ရေးပြ သရုပ်ဆောင်ပြသွားတာ တကယ့်ကို သဘောကျစရာပါ…ပျောက်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဒီစာဖိုင်ကို မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က သိမ်းထားလို့ ပြန်ရလို့ တင်လိုက်တာပါခင်ဗျာ… Buried (2010) သည် IMDb 7.0 Rotten Tomatoes 86% Google User 73% ဒါရိုက်တာ Rodrigo Cortés ရိုက်ကူးထား၍ Chris Sparling ...
Dark TV Series (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Dark TV Series (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး (Original Netflix Series) Season 1 Episode 1 to 10 Genre- Sci-Fi, Thriller, Drama IMDb rating: 8.8/10 Rotten Tomatoes: 88% Released Date - 1st December 2017 Plot 2019 ခုနစ် Germany ရဲ့ အေးချမ်း တိတ်ဆိတ်လှတဲ့ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့။ ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက် အစအနမရှိ ပျောက်ဆုံးသွားတယ်၊ မိုးပေါ်က ငှက်တွေ မြေပေါ် မိုးရွာသလို ရွာကျလာတယ်၊ လျှပ်စစ်မီးတွေ မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပျောက်သွားတဲ့ ကလေးကို မိတ်ဆွေ၊ မိဘနဲ့ ရဲဘက်တို့ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ရှာဖွေရင်း အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ်တို့က လုပ်ရပ်တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတွေ၊ အဖြေရှာလို့ ရှင်းပြလို့မရနိုင်လောက်တဲ့ အဖြစ်အပျက် လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်။ Review နယ်မြို့လေးမှာ ကလေးပျောက်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ Stranger ...
The Hangover Part II (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး(၁၈+)
The Hangover Part II (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး(၁၈+) Imdb Ratings: 6.5/10 Google User : 87 % Genre: Comedy, Mystery Run Time: 1 hour 40 mins The Hangover Part II (2011) သည် IMDb 6.5 Google User 87% ဒါရိုက်တာ Todd Phillips က ရိုက်ကူးထား၍ : Craig Mazin, Scot Armstrong တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Mystery ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Two years after the bachelor ...
The Ninth Gate (1999) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Ninth Gate (1999) မြန်မာစာတန်းထိုး အတတ်ပညာတစ်ခုကို တစ်ဘက်ကမ်းခတ် တတ်မြောက်သွားသူကို ဝိဇ္ဇာလို့ ခေါ်တယ် ။ ဘာသာရေးအရ သာမန်လူတွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ ဂမ္ဘီရအတတ်ပညာတစ်ချို့ကို တစ်ဘက်ကမ်းခတ် တတ်မြောက်ပြီး အရှင်ထွက် အသေထွက်နဲ့ နောင်ပွင့်မယ့်ဘုရားဖူးဖို့ လွတ်မြောက်ရာလမ်းလို့ ခေါ်တဲ့ ထွက်ရပ်လမ်းကို ရောက်သွားတာတွေရှိတယ် ။ သူတို့ကို ထွက်ရပ်ပါက် ပုဂ္ဂိုလ်လို့ ခေါ်တယ် ။ ထွက်ရပ်ပေါက် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဝိဇ္ဇာလို့လည်း ခေါ်ကြသေးတယ် ။ ဝိဇ္ဇာပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်ရှိတဲ့အထဲ ကျွန်တော်တို့သိတာ ပြဒါးဝိဇ္ဇာ ၊ သံဝိဇ္ဇာ ၊ အင်းဝိဇ္ဇာ ၊ ဆေးဝိဇ္ဇာ စသဖြင့် နည်းနည်းပါးပါးပဲ သိကြတာပဲ ရှိသေးတယ် ။ ထားတော့ .... ဝိဇ္ဇာအကြောင်းဆက်ရှင်းနေရင် ကိုယ်တိုင်တောင် အဂ္ဂိရတ် ထထိုးနေရမယ် ။ ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ နဝမမြောက် တံခါးကနေ ထွက်ရပ်လိုင်းကို လျှောက်လမ်းမယ့် စာအုပ်ဝိဇ္ဇာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ...
Thupparivaalan (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Thupparivaalan (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 7.8 Genre : Action,Crime,Mystery Run Time : 151 mins Language : Telugu,English Release Date : 13th Sep 2017 ဒီကားလေးက ကြည့်ဖူးနေကျ တေလဂူကားတွေနဲ့လုံးဝကွဲထွက်နေတဲ့ မင်းသားချော Vishal ရဲ့ Mysteryဆန်တဲ့ကားလေး ရှင်းရှင်းပြောရရင် စုံထောက်ကြီးရှားလော့ဟုမ်းကို ကြိုက်ခဲ့လို့ လား မသိ တေလဂူ စုံထောက်ကားကို အရသာတွေ့ နေမိတယ် ညွှန်းတယ်လို့ ပဲ ဆိုဆို ဒီကားက တေလဂူ(ကောလိဝုဒ်)မဆန်ဆုံးကားလို့ ပြောချင်တယ် တေလဂူမဆန်ဘူးဆိုလို့ တစ်ခြားပြောတာ မဟုတ်ပါ သီချင်းတွေလုံးဝမပါတာ စကားတွေအများကြီး မပြောတာ ဇာတ်​လမ်း အရမ်းကြီးမရှည်တာတွေကို ပြောတာပါ မင်းသားကလည်း နာမည်ကြီး မင်းသား အရင်ဇာတ်ရုပ်တွေနဲ့ လုံးဝကို မတူပဲ တစ်ခေတ်ဆန်းထားတဲ့ကားလို့ ပဲ ဆိုချင်တယ် ...
Flightplan (2005) မြန်မာစာတန်းထိုး
Flightplan (2005) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 6.3/10 Google User : 86% Genre: Drama, Mystery, Thriller Run Time: 1 hour 38 mins Flightplan (2005) သည် IMDb 6.3 Google User 86% ဒါရိုက်တာ Robert Schwentke က ရိုက်ကူးထား၍ Peter A. Dowling, Billy Ray တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားထားကာ သရုပ်ဆောင် Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Drama, Mystery, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ယောက်ျားသေဆုံးသွားသဖြင့် ပူဆွေးသောကရောက်နေရသော အမျိုးသမီး နှင့် သူမရဲ့သမီးတို့ ဘာလင်မှ အမေရိကားသို့ သွားတဲ့လေယာဉ်ပေါ်တွင် စီးနင်းလာရာ အမြင့်ပေ ...
Orphan (2009) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Orphan (2009) မြန်​မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 7.0/10 Rotten Tomatoes: 56% Google User : 88 % Genre: Horror, Mystery, Thriller Run Time:2hours3mins Orphan (2009) သည် IMDb 7.0 Rotten Tomatoes 56% Google User 88% ဒါရိုက်တာ Jaume Collet-Serra က ရိုက်ကူးထား၍ David Leslie Johnson, Alex Mace တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ သရုပ်ဆောင် Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, Isabelle Fuhrman တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Horror, Mystery, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. လင်မယားစုံတွဲတစ်တွဲသည် သူတို့ရဲံကလေးရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားသဖြင့် အပြစ်မကင်းသည့် ၉ ...
Coherence (2013) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Coherence (2013) မြန်​မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 7.2/10 Rotten Tomatoes : 88 Google User : 91 % Genre: Mystery, Sci-Fi, Thriller Run Time: 1 hour 47 mins Coherence (2013) သည် IMDb 7.2 Rotten Tomatoes 88% Google User 91 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ James Ward Byrkit ကိုယ်တိုင်ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်း ရေးသား ရိုက်ကူးထား၍ သရုပ်ဆောင် Emily Baldoni, Maury Sterling, Nicholas Brendon တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Mystery, Sci-Fi, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ကြယ်တံခွန်ဖြတ်သန်းသွားချိန်တွင် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတစ်စု ညစာစားပွဲပါတီကျင်းပနေရာ ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်ပျက်လာရာ ဘယ်လို အဖြစ်အပျက်တွေလဲဆိုတာကတော့ ...
Now You See Me (2013) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Now You See Me (2013) မြန်​မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 7.3/10 Rotten Tomatoes : 49% Google User :90% Genre: Crime, Mystery, Thriller Run Time: 1 hour 55 mins Now You See Me (2013) သည် IMDb 7.3 Rotten Tomatoes 49% Google User 90 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ Louis Leterrier က ရိုက်ကူးထား၍ Ed Solomon, Boaz Yakinတို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ သရုပ်ဆောင် Jesse Eisenberg, Common, Mark Ruffalo တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Crime, Mystery, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. F.B.I. ...
Kill’em All (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Kill'em All (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings:4.2/10 Google User : 80% Genre: Action, Crime, Mystery Run Time: 96mins အက်ရှင်ကားကောင်းတွေကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် အင်ရှင်မင်းသားကြီး Van Damme ရဲ့ ၂၀၁၇ ထွက် ဇာတ်ကားကောင်လေးတစ်ကားပါ Kill'em All (2017) သည် IMDb 4.2 Google User 80% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Peter Malota က ရိုက်ကူးထား၍ Jesse Cilio, Brian Smolensky တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Jean-Claude Van Damme, Autumn Reeser, Peter Stormare တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Crime, Mystery ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ.. ရှုပ်ထွေးသောအပစ်အခတ်တစ်ခုပြီးတဲ့နောက် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော လူစိမ်း ...
Unlocked (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Unlocked (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 6.1/10 Rotten Tomatoes : 40% Genre: Action, Drama, Mystery Run Time : 1 hour 38 mins Unlocked (2017) ဇာတ်ကားသည် IMDb 6.1 Rotten Tomatoes 40% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Michael Apted ရိုက်ကူးထား၍ Peter O'Brien ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Noomi Rapace, Orlando Bloom, Toni Collette တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Drama, Mystery ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကို ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ CIA စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိကို လန်ဒန်အတွက် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှု အန္တရာယ်တစ်ခုနှင့် ပရိယာယ်ပြု ဖျားယောင်းခံရသောအခါ ဘယ်လို အက်ရှင်အကွက်ကောင်းကောင်းတွေကြည့်ရှုရမလဲ ဇာတ်လမ်းမှာ ကြည့်ရှုပေးကြပါလို့ Review by - Win ...
The Conjuring (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Conjuring (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 7.5/10 Rotten Tomatoes : 86% Genre:Horror, Mystery, Thriller Run Time : 1hour 52 mins The Conjuring (2013) ဇာတ်ကားသည် IMDb 7.5 Rotten Tomatoes 86% ရထား၍ ဒါရိုက်တာ James Wan ရိုက်ကူး၍ Chad Hayes နှင့် Carey Hayes တို့ ဇာတ်လမ်းရေးသားပြီး သရုပ်ဆောင် Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Horror, Mystery, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. သိပ္ပံနည်းကျ စုံစမ်းရေးသမားများ ဖြစ်သော Ed နဲ့ Lorraine Warren သည် လယ်တောအိမ်တစ်အိမ်ရှိ မိသားစုကို ...
Red Eye 2005 မြန်မာစာတန်းထိုး
Red Eye 2005 မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb ratings:6.5/10 Rotten Tomatoes 79% Genre : Mystery, Thriller Run Time: 1 hour 25 mins Red Eye (2005) ဇာတ်ကားသည် IMDb 6.5 Rotten Tomatoes 79% ရထားသော Rachel McAdams, Cillian Murphy, Brian Cox ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော ဒါရိုက်တာ Wes Craven ရိုက်ကူးထားသော Mystery, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ….. အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည် လေယာဉ်ပေါ်တွင် သူစိမ်းတစ်ယောက်၏ ပြန်ပေးဆွဲခြင်းကို ခံရလေသည်….သူမရဲ့အဖေကို သတ်ပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြီး နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ကို ထုတ်ပေးပြီး သူမရဲ့ ဖမ်းဆီးမှုနဲ့ လဲလှယ်ရန် အကွက်ဆင်မှုတွင် သူမ လွတ်မြောက်နိုင်ပါမည်လား မလွတ်မြောက်ဘူးလားဆိုသည်ကိုတော့ ဇာတ်လမ်းတွင် ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါလို့……. Reviewed by Win Kyaw ...
Annabelle Creation (2017)မြန်မာစာတန်းထိုး
Annabelle Creation (2017)မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb rating - 7.1 /10 Rotten Tomatoes - 67% Genre - Horro/ Mystery / Thriller Running Time - 1 h 49 mins ==================== အကြည်မစောင့်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါ။အခုတင်ပေးလိုက်တာက အရမ်းမကြည်ပေမယ့် ကြည့်လို့တော့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။ အကြည်ထွက်လာရင် ပြန်လည် Update လုပ်ပေးပါ့မယ် ခင်မျ စတင်ပြသချိန်မှာပဲ ဒေါ်လာ ၉၉ သန်းကျော်ရရှိတဲ့ Annabelle ဇာတ်ကား .............................................. အမေရိကန် ထိတ်လန့်ဖွယ်ဇာတ်ကား Annabelle Creation စတင်ပြသတဲ့ သြဂုတ်လထဲမှာပဲ ၀င်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၉ သန်းကျော်ရရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်က အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကြာမြင့်ချိန် ၂ နာရီနီးပါးရှိပါတယ်။ စတင်ပြသချိန်မှာပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံတို့မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၆ သန်း ...
To KillaMockingbird (1962) မြန်မာစာတန်းထိုး
To KillaMockingbird (1962) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb rating - 8.3/10 Rotten Tomatoes - 91 % Genre - Drama / Mystery Running time -2hours 10 mins ဒီတစ်ခါFOFရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဂန္ထဝင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကားဖြစ်တဲ့ To KillaMockingbird ကို အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားဘာသာပြန်ပြီး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ ၁၉၆၀ ခုနစ်တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Harper Lee ရေးသားသော To killamockingbird ကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် ရိုက်ကူးထားတာပါ။ဒီတော့ မူရင်းစာအုပ်အကြောင်းကို အနည်းငယ် ပြောပြချင်ပါတယ်။ Harper Lee ဟာ To killamockingbird ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ...
The piper(손님) မြန်​မာစာတန်းထိုး
The piper(손님) မြန်​မာစာတန်းထိုး IMDb - 6.3/10 Release Date - July 9, 2015 Type - Fantasy, Mystery Time - 2h 59min Piperဆိုရင်​ ၆တန်း​ကျောင်းသားဘဝက Eng သင်​ခန်းစာတစ်​ခုကို သတိရကြမှာပါ... ဒီ Piper ဇာတ်​ကား​လေးမှာဆိုရင်​ဖြင့်​ ကျွန်​မတို့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်​ပြီးသားဖြစ်​တဲ့ ဇာတ်​​ကြောင်း​လေးကို စစ်​ပြီး​ခေတ်​ကာလရဲ့ပုံရိပ်​များနဲ့အတူ ပြန်​လည်​ ​တွေ့မြင်​ခံစားရမှာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီဇာတ်​ကားမှာဆိုရင်​ သားအဖနှစ်​​ယောက်​ရဲ့ ဆိုလ်းမြို့ဆီသို့ခရီးက​နေ အစပြုပါတယ်​.... Woo Ryong(Ryu Seung Ryong) လို့အမည်​ရတဲ့ ပု​လွေသမားဟာ သူ့ရဲ့ ​နေမ​ကောင်းဖြစ်​​နေတဲ့သား​လေး Young Nam(Goo seung Hyeon) ကို ​ဆေးကုဖို့ Seoul မြို့ဆီ ခရီးထွက်​ခဲ့ပါတယ်​... ​တစ်​​နေ့ သူတို့ဟာ အမည်​မဲ့ရွာတစ်​ရွာဆီ ​ရောက်​ခဲ့ပါ​တော့တယ်​ ... ​လူ​ခြေကင်းမဲ့​နေတဲ့ ​တောထဲက တစ်​သီးတခြားရွာ​လေးဟာ ပြင်​ပ​လောကနဲ့အဆက်​အသွယ်​ပြတ်​​နေခဲ့ပြီး နတ်​အယူအဆ အချို့ပါ ...